INguqulelo Yehlabathi Elitsha—IBhayibhile Eyomeleleyo
Umsebenzi Wethu Wokupapasha
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiCatalan IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMingrelian IsiNahuatl (saseCentral) IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiOssetia IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTelugu IsiTigrinya IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiValencian IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu isiWallisian
KumaNgqina kaYehova ayikho incwadi exabiseke njengeBhayibhile. Ayifunda rhoqo ibe afundisa ngayo abanye abantu iindaba ezilungileyo zoBukumkani bukaThixo. (Mateyu 24:14) Ngenxa yoko, iiBhayibhile zawo ziguga msinyane. Yiloo nto kuye kwaqinisekiswa ukuba iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ehlaziyiweyo ka-2013 yenziwa kakuhle nangendlela eyomeleleyo.
Le Bhayibhile intsha bekufuneka yenziwe yomelele gqitha. Xa abameli bamaNgqina esebe lokuprinta eliseWallkill, eNew York, eUnited States babexoxa nesikhulu senkampani yeencwadi, sathi kubo: “Le Bhayibhile niyifunayo asikwazi ukuyenza.” Saqhubeka sathi: “Ngelishwa, iiBhayibhile zenziwa ngendlela yokuba zibe ntle kodwa azomelelanga.”
Ezinye iiNguqulelo Zehlabathi Elitsha ezakha zenziwa zazikhawuleza ukonakala zide zikrazuke lula kwiindawo ekushushu kakhulu kuzo. Kwisebe lokuprinta baye bahlala phantsi becinga ngendlela yokwenza amaqweqwe neyokuwancamathelisa ukuze iiBhayibhile ezaziza kwenziwa zikwazi ukulungela zonke iimozulu. Emva koko, baye benza iiBhayibhile ezaziza kuvavanywa ngamaNgqina ahlala kumazwe abanda kakhulu nakwamanye atshisa kakhulu.
Emva kweenyanga ezintandathu ezi Bhayibhile zabuyiselwa ukuze zihlolwe. Ngoko ke isebe lokuprinta laphucula indlela yokuzenza laza laphinda lathumela ezinye ukuba zivavanywe. Zizonke iiBhayibhile ezavavanywayo ziyi-1 697. Ezimbalwa zazo zamoshakala ngempazamo. Ngokomzekelo, enye iBhayibhile yanethwa ubusuku bonke kanti enye yatshona kumanzi esichotho. Iziphumo zovavanyo lwezi Bhayibhile nokumoshakala kwazo ngempazamo kwalinceda isebe lokuprinta labona indlela elinokuziphucula ngayo iiBhayibhile ezintsha.
Ebudeni bolu vavanyo olwenziwa ngo-2011, amaNgqina athenga oomatshini bokuprinta abasebenza ngokukhawuleza kwisebe lokuprinta eliseWallkill, e-Ebina naseJapan. Injongo yoku yayingeyiyo eyokuba kukhawuleze kugqitywe kuphela kodwa neyokuba iiBhayibhile eziprintwa kula mazwe mabini zifane twatse.
Amaqweqwe Agobayo Abangela Ingxaki
Ekuqaleni kuka-2012 kwaprintwa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha eneqweqwe elithambileyo ngombala omaroon nomnyama. Noko ke, oomatshini abatsha basebenzisa iglu kuqweqwe olungazange lwavavanywa, oko kwabangela ukuba amaqweqwe eBhayibhile akhawuleze agobe. Kwafuneka kuyekwe ukuprintwa kuba le ngxaki ingasombululeki.
Abenzi bolu qweqwe luthambileyo baqaphela ukuba le ngxaki yokugoba kweekona ixhaphakile yaye ayinakuncedwa ngokulula. Kunokuba ancamele koluqinileyo, amaNgqina ayezimisele ukwenza iBhayibhile enoqweqwe oluthambileyo nolungazukugoba. Emva kweenyanga ezine zovavanyo olwaluquka iiglu namaqweqwe ahlukahlukeneyo amaNgqina ade afumana elona amele alisebenzise aza aqala phantsi ukusebenza kwaza kwaprintwa iiBhayibhile ezinoqweqwe olungagobiyo.
Kwaphinda Kwayeka Ukuprintwa
NgoSeptemba 2012 kwakhutshwa umyalelo wokuba kuyekwe ukuprintwa iiBhayibhile, ezikhoyo zithunyelwe emabandleni kuze kulindwe iNguqulelo Yehlabathi Elitsha ehlaziyiweyo. Kwakufuneka le Bhayibhile ikhululwe ngo-Oktobha 5, 2013 kwintlanganiso yonyaka ye-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
Amasebe okuprinta athunyelelwa iBhayibhile ngekhompyutha ngoLwesihlanu ka-Agasti 9, 2013 kwaza kwaqalwa ukuprintwa ngosuku olulandelayo. NgoAgasti-15 yagqitywa iBhayibhile yokuqala. Kwiiveki ezisixhenxe ezalandelayo, eWallkill nase-Ebina kwasetyenzwa imini nobusuku ukuze kwenziwe iiBhayibhile eziyi-1 600 000 ukwenzela ukuba wonke umntu owayeza kuya kuloo ntlanganiso afumane eyakhe.
Le Bhayibhile intsha intle ibe yomelele kodwa eyona nto ixabisekileyo ngayo ngumyalezo wayo. Emva kokuba lifumene iBhayibhile, elinye ibhinqa laseUnited States lathi, “Ngenxa yale Bhayibhile intsha ihlaziyiweyo, ngoku ndiyayiva into endiyifundayo.”
Ividiyo: Indlela Ezenziwa Ngayo IiBhayibhile EJapan
Bona indlela esinceda ngayo isakhiwo ekuprintwa kuso iiBhayibhile eJapan ukuze abantu abasehlabathini bafumane iiBhayibhile.
Sithini esona sigidimi sibalulekileyo seBhayibhile?
Ingxelo Yentlanganiso Yonyaka—Oktobha 2013